किन हिंसा र प्रतिहिंसातर्फ डोर्‍याइँदै छ? | नेपाली पब्लिक किन हिंसा र प्रतिहिंसातर्फ डोर्‍याइँदै छ? | नेपाली पब्लिक
किन हिंसा र प्रतिहिंसातर्फ डोर्‍याइँदै छ?
नेपाली पब्लिक २०७६, १२ असार बिहीबार २०:२४
सत्तासीन पार्टीकै नेता जनार्दन शर्माले भनेअनुसार प्रतिबन्धित नेकपा विप्लवका नेता कुमार पौडेलको पहिले हात भाँचेपछि गोली हानी हत्या गरिएको रहेछ। अचम्म र खेदको कुरा त के हो भने आजको समयमा पनि हाम्रा प्रहरी राजनीतिक विद्रोहीप्रति यति क्रूर हुन सक्दा रहेछन्। कसरी त्यहाँ भएका प्रहरीले हात भाँचेर छटपटाइरहेको मानिसलाई गोली हान्ने आदेश दिन र गोली हान्न सकेको होला? विद्रोहीप्रति सरकारको जस्तोसुकै नीति भए पनि प्रहरी कर्मचारीले संविधान र ऐन कानुनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँ यत्रो आक्रोश, निर्दयता र क्रुरता किन? यस्तो अवस्थामा प्रहरी र जनता साझेदारी कार्यक्रम कसरी सम्भव छ? प्रहरी कर्मचारी हाम्रै भाइ–छोरा हुन् भने विद्रोही चाहिँ को हुन्? यही हो जनधनको सुरक्षा भनेको?
नेपालका प्रहरी भनेको केवल शासकका लागि तयार गरिएको संरचना हो। अहिलेसम्म पनि जनताका लागि हुन सकेको रहेनछ भन्ने उदाहरण हो यो। ३० वर्षको पञ्चायत कालमा अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व भन्दै राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गरेर पदोन्नति र लाभ लिन अभ्यस्त हुँदै आएको नेपाल प्रहरी आज पनि आधारभूत रूपले परिवर्तित हुन सकिरहेको छैन। प्रश्न कुमार पौडेल हत्याको मात्रै होइन, गत वर्ष भक्तपुरको जंगलमा भएको हत्या र भर्खरै भोजपुरमा माओवादी नेता तीर्थराज घिमिरे हत्याले यस प्रकारको फर्जी ‘इन्कान्टर’ अपवादका रूपमा होइन, क्रमबद्ध रूपमा भइरहेकोप्रति प्रहरीमा थोरै पनि आत्माग्लानिको आभाससम्म पनि पाइँदैन।
यस्तो गम्भीर चर्चा चलिरहेको अवस्थामा प्रहरीका आईजीपी कुमार पौडेल विप्लव समूहका नेता मात्रै होइन, अन्य अपराधमा पनि संलग्न भएको घोषणा गर्छन्। के उनी धेरैवटा अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका कारण ती आरोप पुष्टि नगरी उनको गैरन्यायिक हत्या उचित ठहरिन सक्छ? अन्यथा इन्काउन्टर फर्जी थियो कि थिएन भन्ने मुद्दालाई अन्यत्र मोड्नका लागि आईजीपीले यो प्रसंग उठाएका हुन् भने यो घटना प्रहरीको माथिदेखि तलसम्मको सहमतिमा सुनियोजित रूपमा गरिएको हो भन्नुपर्ने हुन्छ।
संसारभरि न्याय र मानवअधिकारको शङ्खघोष गर्ने भनिएको अमेरिका इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको लेनदेन गरेर तिनीहरूलाई अभयदान दिन तयार हुन्छ। तर, कुमार लामाले त जेल बस्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले सत्तामा रहेकाहरूको स्वार्थका लागि संविधान र कानूनबाहिर गएर आदेश मान्नु भनेको चकडी बजाउनु हो र त्यसको परिणाम त्यसैले मात्रै भोग्नुपर्ने हुन्छ, जसले नाजायज आदेश पालन गरेको थियो।
प्रहरी सेवा भनेको ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्ने एउटा निकाय हो। तर, त्यस्तो चेन अफ कमान्ड भनेको संविधान र ऐन–नियमअन्तर्गत हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर गएर होइन। यदि सत्तामा रहेको शासक वर्गलाई खुसी पारेर कुनै व्यक्तिगत लाभ लिनका लागि यस्तो जघन्य काम प्रहरीबाट भएको हो भने के कुरा फेरि पनि स्मरण गराउन जरुरी छ भने सधैँ शासन सत्तामा एउटै जात र वर्गका मानिस मात्रै बसिरहँदैनन्। त्यसपछि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ त्यही घटना स्थलमा आदेश दिने र आदेश पालन गर्नेले नै।
स्मरण रहोस्, टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर, बाँदरमुढे हत्या, मुक्तिनाथ हत्याजस्ता अनगिन्ती हत्या गराउने पुष्पकमल, बाबुराम, बादल, ओली आदि सबै आज एकै ठाउँमा छन्। र, संसारभरि न्याय र मानवअधिकारको शङ्खघोष गर्ने भनिएको अमेरिका इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको लेनदेन गरेर तिनीहरूलाई अभयदान दिन तयार हुन्छ। तर, कुमार लामाले त जेल बस्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले सत्तामा रहेकाहरूको स्वार्थका लागि संविधान र कानूनबाहिर गएर आदेश मान्नु भनेको चकडी बजाउनु हो र त्यसको परिणाम त्यसैले मात्रै भोग्नुपर्ने हुन्छ, जसले नाजायज आदेश पालन गरेको थियो।
यो त भयो आजसम्म पनि नेपालको प्रहरी सेवामा रहेकाहरूको स्वभाव, चरित्र र मानसिकतामा आधारभूत अन्तर नआएको कुरा तर वर्तमान सरकार जसले आफूलाई निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार निर्वाचित सरकारको दाबी गर्छ, त्यस्तो सरकारले आफ्नो राजनीतिक विरोधीहरूलाई संविधान र कानूनअनुसार दण्डित गर्ने हिम्मत नगरेर कुनै तानाशाहले जस्तो संविधान र कानूनलाई छलेर जघन्य हत्या गर्नेजस्ता काम किन गरिरहेको छ? सर्वप्रथम त विदेशी योजनाअनुसार भएको १२ बुँदे सहमतिको औचित्य पुष्टि गर्नलाई संविधानसभा नामको पाखण्ड रचिएको थियो। त्यस संविधान सभाले अत्यन्त जालझेलपूर्वक नेपाली जनताको अभिमतलाई आफ्नैविरुद्ध उपयोग हुने अवस्थामा पुर्‍यायो।
यदि सत्तामा रहेको शासक वर्गलाई खुसी पारेर कुनै व्यक्तिगत लाभ लिनका लागि यस्तो जघन्य काम प्रहरीबाट भएको हो भने के कुरा फेरि पनि स्मरण गराउन जरुरी छ भने सधैँ शासन सत्तामा एउटै जात र वर्गका मानिस मात्रै बसिरहँदैनन्। त्यसपछि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ त्यही घटना स्थलमा आदेश दिने र आदेश पालन गर्नेले नै।
त्यसरी बनेको यो संविधानबाट आएको अहिलेको सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले जनताको विश्वास पूर्णरूपले गुमाइसकेका छन्। नेपाललाई रणनीतिक उपयोग गर्ने विदेशी शक्तिहरूको सुनियोजित योजनाअनुसार काम गर्न बनेको अहिलेको शासन व्यवस्थाले उनीहरूकै योजनालाई सघाउ पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेको छ। अरू कुरा जेजस्तो भए पनि अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउँछ र देश विकासतर्फ बढ्छ भन्ने आशा लिएर बसेका सर्वसाधारण जनतामा वितृष्णा पैदा गरेर देशलाई फेरि अस्थिरतातिर धकेल्नकै लागि हुनुपर्छ, सरकार यस्तो काम गरिरहेको छ।
के सरकारमा बस्ने मानिसलाई थाहा छैन, धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिसकेपछि कुनै पनि धर्मसँग राज्यलाई संलग्न गराउन हुँदैन भन्ने कुरा? के यिनीहरूलाई थाहा छैन, अहिले ल्याएको नागरिकता विधेयकले नेपालको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्न सक्छ भन्ने? के यिनीहरूलाई थाहा छैन, आजको युगमा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्दा मानिसको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ भन्ने कुरा? के यिनीहरूलाई थाहा छैन, नेपालको गुठी व्यवस्थालाई चलाउनु भनेको नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई समाप्त पार्नु हो भन्ने कुरो? यसरी नेपाललाई सबैतिरबाट अस्तव्यस्त बनाउनका निम्ति सरकारले योजनाबद्ध रूपमा यस्ता कामलाई अघि बढाइरहेछ। यसबाट कुनै नेपालीको होइन, विदेशीको उद्देश्य र स्वार्थ पूरा गर्न गरिएका यी काम हुन् भन्नेमा आमजनतामा पनि कुनै भ्रम रहन हुँदैन र रहेको पनि छैन।
अहिले जुन सिलसिलाबद्ध रूपमा गैरन्यायिक हत्या चलाइरहिएको छ, त्यो पनि नेपाललाई अस्थिर पार्ने योजनाकै एउटा अंग हो। सत्तामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टी अहिले पनि २००९–१० सालतिर कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएकोमा कांग्रेसलाई निन्दा गरिरहेको छ। त्यही कम्युनिष्ट पार्टीले आफैँबाट अलग भएर गएको कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम मात्रै गरेको छैन, त्यसका कार्यकर्तालाई देशव्यापी धरपकड र मुठभेडका नाममा एकपछि अर्को हत्या गर्दै गइरहेको छ। जब कि विद्रोही पक्ष प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहले छिटफुट बम विस्फोट र चन्दा उठाउने कामबाहेक युद्धको नै घोषणा गरिसकेको थिएन। तर, सरकारको तर्फबाट भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि आपराधिक समूह घोषणा गरेर व्यापक धरपकड र कथित इन्काउन्टरलाई पनि तीव्रता दिँदै आएको छ। सरकारका तर्फबाट यति आक्रामकता किन?
विद्रोही पक्ष प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहले छिटफुट बम विस्फोट र चन्दा उठाउने कामबाहेक युद्धको नै घोषणा गरिसकेको थिएन। तर, सरकारको तर्फबाट भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि आपराधिक समूह घोषणा गरेर व्यापक धरपकड र कथित इन्काउन्टरलाई पनि तीव्रता दिँदै आएको छ।
गैरकानूनी चन्दा उठाउने कामलाई रोक्नु र विस्फोटका घटनामा संलग्नलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्नु त राज्यको काम नै हो। तर, राज्यले विद्रोहीलाई उत्तेजित पारेर हिंसा र प्रतिहिंसाको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयत्न किन गरिरहेको छ? सरकार आवश्यक नै नपरेका अनेक विधेयक ल्याएर समाजलाई आतंकित र आक्रोशित बनाउन एकातिर लागिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ एउटा धिमा गतिमा हिँडिरहेको विद्रोही पक्षलाई उत्तेजित पारेर समाजलाई फेरि हिंसाको बाटोतिर धकेल्न खोजिरहेको छ।
सरकारको यो काम केवल आफ्ना असफलतालाई ढाकछोप गरेर आम मानिसको असन्तुष्टिलाई अर्कोतिर मोड्नका लागि मात्रै अवश्य नै हैन। यो माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र त्यस विद्रोहलाई अवतरण गराउने नाममा भएको १२ बुँदे सहमति र त्यसपछिका जनताको रायविना नै ल्याइएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र, संविधानसभाको जालझेलपूर्ण आयोजना र त्यसले बनाएको भनिएको संविधान र त्यसबाट बनेको राजनीतिक व्यवस्थाको उद्देश्य नै नेपाललाई अस्थिर बनाएर विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिक खेल मैदान बनाउनु हो। र, सरकार त्यही उद्देश्यका लागि ल्याइएको भएकाले उसले त्यही काम गरिरहेको हो अन्यथा कुुनै पनि सरकारले यस्तो काम गर्ला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिने थिएन।